कुरै बुझिएन त हँ – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:३१ मा प्रकाशित
हैन ! ओलीबाले बैशाख १७ र २७ मा चुनाव भन्या हुन कि, त्यो तोक्या बेलासम्म सडकाँ मान्छे उतार्ने प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्या हुन् कुरै बुझिएन त हँ । सडकाँ दिन्कै जनता ओराल्ने, अदालताँ बहस चल्याचल्यै हुने । अनि निर्वाचन आयोगले कुन पार्टी कसको भन्ने निर्णय नै नगरेर दिन गुजार्दै जाने हो भने चुनाव कैले हुन्छ ? कतै ओलीबा चुनावै नगरी दिन गुजार्ने चक्कराँ त छैनन् । कैले ओलीले चुनाव गर्देला र सत्ता हत्याएर मोजमस्ति गरम्ला भनेर बस्या प्रचण्ड र देउवालाई आशैआशाँ झुण्ड्याइदिने भए त ओलीबाले । त्यसो त मधेसी नेतारु झन् कैले चुनावाँ जाम्ला र सत्ताँ जान मोदी ग्वारम्ला भनेर कस्सिएर बस्याछन् ।
गोडा दुएक मैनाँमा कसरी चुनाव होला र ? सूर्य चिन्हका लागि लड्या कमिनिष्ट नेतारु गोरुको कैले झर्ला र खाम्ला भन्याझैँ गरी निर्वाचन आयोगतिर फर्केर बस्या छन् । थपलियाले कैले कता पट्टि फाल्दिने हुन् । भन्न त जताततै ओलीबाकै सेटिङ्ग छ भन्छन् । साँच्चिकै त्यसै हो भने त केहीदिन ढिलै भए नी चुनाव त हुन्यै भो भन्नुपर्ला । तर के गर्नु कमिनिष्टहरलाई आँफू चुनाव हार्रियला भन्ने डरले संसद पुनस्र्थापना भैद्याभा हुन्थ्यो भनेर सडकाँ मान्छे उराल्नै फूर्सद छैन । हैन ति मान्छे नी काँट आउँछन गाँठे ।
ओलीबाले मान्छे भन्या कस्ता हुन्छन् मेरो २३ गत्या सभाँ हेरौला भनेर प्रचण्डलाई औला ठड्याएछि अताल्लिया प्रचण्डले नि पख ! २८ गते देखाइ दिन्छु भनेर आफ्नो विरानो सारा मान्छे खेडेर राजधानीका सडकाँ छपक्कै सुताइदेछि विचरा आmेीबा ऐले ती मान्छे देखेर इन्तु न चिन्तु भा छन् । दुइटै नेताहरका बिचाँ यै मान्छे देखाउने होडबाजी मात्रै देखिने हो भने त विचरा देश गइल भैंस पानीमे हुने त होला नी । कोरोना र कमिनिष्ट दुबै मिलेर लुट्या देशाँ अब के नै बाँकि रहला र ? त्यसैले जनता हो, कमसेकम अब त सचेत बनो । कति भेडा बन्छौं । अर्कालाई लुटने लाइसेन्स मिलाइ दिन सडकाँ जानुको पनि त सिमाहोला त ! सँधैभरी सडकाँ गएर घरको ताउली तात्ला त ? – वेदर्षि